Booliiska Puntland oo ku-daba jira raadinta shaqaale gargaar oo la af-duubay - Sabahionline.com
Booliiska Puntland oo ku-daba jira raadinta shaqaale gargaar oo la af-duubay Luulyo 13, 2012
Booliiska Puntland ayaa xiray waddooyinka muhiimka ah ee gobolka Mudug si ay uga hor-tagaan in af-duubayaashii shaqaalaha gargaarku ay baxsadaan, Garowe Online ayaa warisay Khamiisti (12-kii Juulaay).
3 shaqaale gargaar oo lagu af-duubay Soomaaliya
Welwel laga qabo ammaanka rayidka oo isa soo taraya xilli qabashada Kismaayo ay kaabiga tahay
Maxkamad Kenyaan ah oo laba qof ku eedaysay in ay xubno ka yihiin al-Shabaab iyo in haysasho hub sharci-darro ah
Wadaad Soomaaliyeed oo caan ah oo ka badbaaday qarax baabuur oo Muqdisho ka dhacay
Booliiska Puntland ayaa ilaa Arbacadii raadinayay seddexda shaqaale ee Hay'adda Gargaarka Caalamiga ah ee uu fadhigeedu yahay Sweden (IAS), War-saxaafadeed kasoo baxay madaxda Puntland ayaa lagu sheegay. "Warar ay heleen sir-doonka Puntland ayaa xaqiijinaya in af-duubayaashu ay u baxsadeen degmada Hobyo, oo aan kamid aheyn maamulka Puntland,"
Sarkaal ka tirsan booliiska Gaalkacyo, Maxamed Axmed ayaa sheegay in aysan wali caddeyn in af-duubayaashu ay al-Shabaab ka tirsanyihiin. "Af-duubayaasha iyo al-Shabaab waxaa macquul ah in ay wada-shaqeyn lahaayeen," ayuu yiri.
Xukuumadda Puntland ayaa cadaysay sedexda shaqaale gargaar oo kala ahaa Madoni, madaxa wafdiga Kariyota, iyo nin injineer ah, iyo Cabdinuur Kambasse. Muxuu kula yahay qoraalkan?